कहिलेसम्म चल्छ यो नांगो लुटतन्त्र ? – कमल कोइराला Weekly Nepal
कहिलेसम्म चल्छ यो नांगो लुटतन्त्र ? – कमल कोइराला
२०७३ फागुन २३ गते सोमबार एमालेको सभास्थललाई सुरक्षा प्रदान गरी तैनाथ प्रहरीहरूमाथि आक्रमण गर्न गुलेली ताकीताकी ढुंगामुढा गर्दै, लाठी लिँदै गर्दा प्रहरीले आत्मसुरक्षाका लागि चलाएको गोलीले पाँच जनाको मृत्यु भयो । कार्यक्रम सकिएपछि गरिएको हमलाबाट स्पष्ट हुन्छ यो योजनाबद्ध ढंगले हिंसा भड्काउन गरिएको आक्रमण थियो । कार्यक्रमस्थलमा सबै नेताहरूको सम्बोधन सकिइसकेको थियो ।
तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र अन्य शीर्ष एमालेका नेताहरू त्यहाँ थिए । विभत्स अप्रिय दुर्घटना गराउने ‘कु–प्रयास’ स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले मौकैमा कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरी त्यस षडयन्त्रलाई विफल पारे ।
मौकामै बुद्धि पुर्‍याई ठूलो र पछिसम्म धेरै चर्चित रहनसक्ने नराम्रो दुर्घटना हुन पाएन । टीकापुरमा पहिले नै बुद्धि पुर्‍याउन नसक्दा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित इन्स्पेक्टर तथा प्रहरी जवानहरूले ज्यान गुमाउन पर्‍यो र एक अबोध दुधे बालक समेतको संहार भएको थियो । त्यसको केही बर्ष अघि वि.सं.२०६३ चैत ७ गते २७ माओवादी युवायुवतीहरूलाई लखेटी लखेटी हत्या गरिएको थियो ।
तर, सप्तरी राजविराजमा टीकापुर प्रहरी संहार र गौरसंहार दोहोरिन पाएन । शीर्ष राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूको पनि हिंस्रक आक्रमणकारीहरूबाट रक्षा गर्ने काम भयो । जनधनको नोक्सान र संहार हुन नदिने प्रशासक र प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रमोशन र सम्मान, तक्मा प्रदान गर्नुसाटो कुनै प्रकारको जाँचबुझ नगरी फिर्ता बोलाइयो । साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारोको उखान चरितार्थ गरियो ।
सत्य हो या किंवदन्ती हो धेरै पुरानो समयमा पूर्वी नेपालको कुनै राज्यमा हाडभंग राजा र भांडभंग मन्त्री थिए रे । जो यस्तै यस्तै उट्पट्याङ शासन गर्दथे । अहिलेका सत्ताधारी नेताहरूले समानुपातिक भन्दै कमसेकम दुई दर्जन सेठ साहुकारहरूलाई करोडौं गोज्याउँदै सांसद पद बेचबिखन गर्दै आएको तथ्य नेपाली जनता समक्ष छ । अब आएर विदेशमा सम्पूर्ण राष्ट्र र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत पद पनि वर्तमान नेताहरूले बेचबिखन र डाक बढाबढ लिलामीमा चढाइसके ।
म्यानपावर कम्पनीका, राम्रो ख्याति नभएका मालिक मालिक्नीलाई उनीहरूले मानव तस्करी गर्ने देशमै नियुक्त गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ र देशको इज्जतको रक्षा हुन्छ कि व्यक्तिगत नाफा आर्जनका लागि हुने पदको दुरुपयोगबाट राष्ट्रको अहित र बेइज्जती दुवै हुन्छ ? हालै राजदूतमा नियुक्त दुई म्यानपावरका मालिकलाई ठूलो हो–हल्ला चलेपछि सरकारले नाम फिर्ता लिएको थियो तर हिन्दीमा चोरी और सिनाजोरी वा नेपालीमा जो चोर उसकै ठूलो स्वर चरितार्थ भयो । एकजना भ्रष्टाचारका निर्भिक संचालन गर्दै लुटको सम्पत्ति सोहोर्दै आएका नेताले फेरि प्रचण्डलाई उनैलाई नियुक्त गर्न लगाएको साह्रै भद्दा राजनीतिको दृश्य जनता समक्ष छर्लङ्ग छ ।
देशमा प्रजातन्त्रको विकास नहोस्, जनताले कुनै तहमा पनि आफूले आफ्नै माझबाट आफूले निर्वाचन गरेका प्रतिनिधिहरूमार्फत शासनको चाहना गरेका छन् । तर, जातीय घृणावादी फासिस्टहरू नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुने सम्भावनालाई नै निमोठ्ने घोषणा गरिसकेका छन् । वर्तमान सत्ताधारीहरू पनि जनताले मत हाल्ने निर्वाचन हुन नपाओस् र दुई दशकदेखिको नांगो भागवण्डातन्त्र र लुटखसौटतन्त्र चलिरहोस् भनि भित्रभित्रै षड्यन्त्ररत रहेको कुरा पत्रकारहरूले लेख्न र जनताले भन्न थालिसकेका छन् ।
भारतमा नबिराईकन हरेक पाँच बर्षमा लोकसभाको चुनाव हुन्छ । भारतमा सन् १९५२ देखि आम निर्वाचन चलेकोचल्यै छन् । कहिलेकाहीं कुनै दलको बहुमत पुग्न नसके बरु झन चाडैं लोकसभा भंग गरी मध्यावधि चुनाव भएका छन् । भारतको त्रुटीपूर्ण प्रजातन्त्र पनि प्रजातन्त्र मानिन्छ तर नेपालको वर्तमान वर्णसंकरतन्त्रलाई डेमोक्रेसी नमानी अन्तर्राष्ट्रिय रुपले शासन प्रणालीको वर्गीकरण गर्नेहरूले हाइब्रिड रिजिम मात्र मान्दछन् । कहिले स्थापित हुन्छ फेरि नेपालमा प्रजातन्त्र ? कहिले शुरु हुन थाल्ने हो अनिर्वाचित नांगो लुटतन्त्रको अन्त ?